Overactive Bladder and Urgency in Somali | Continence Foundation of Australia
Overactive Bladder and Urgency in Somali
Kaadi-haysta kacsan iyo degdegga
Waa maxay kaadi-haysta kacsan?
Kaadi-haystu waa muruq kaas oo urura si uu faaruqiso kaadi-haysta markay buuxsanto oo aad adiguna diyaar u noqoto inaad faaruqiso. Kaadi-haysta kacsan macnaheedu waa in kaadi-haystu ururto ka hor intayna ayna buuxsamin. Mararka qaarkood way ururtaa markii aadan diyaarka ahayn. Badanaa waxaad aadi kartaa musqusha waxaana kugu adag inaad isku celiso ilaa aad halkaas gaarto. Mararka qaarkood Waxaad sii dayn kartaa kaadida intaad u sii socoto musqusha.
Maxaa keenaa kaadi-haysta kacsan?
Kontaroolka kaadi-haysta oo liita waxaa keeni kara dhibaatooyinka caafimaad, sida:
lahaanshaha qanjirka borosteytka oo balaarta.
Kaadi-haysta kacsan waxaa keeni kara caadaysiga kaadi-haysta oo liita muddo dheer.
Tusaale ahaan dadka qaarkiis sababta keenta lama yaqaan.
Waa maxay caadaysiga kaadi-haysta caadiga ah?
Waa wax caadi ah inaad:
faaruqiso kaadi-haystaada markaad ka toosto sariirta subaxdii.
faaruqiso kaadi-haystaada 4 ilaa 6 jeer maalintii.
faaruqiso kaadi-haystaada intaadan tegin sariirta habeenkii.
Kaadi-haysta caafimaadka qabta waxay qaadaa 1.5 ilaa 2 koob oo kaadi ah. Taas oo la mid ah 300 – 400ml. Kaadi-haystaada waxay intaas qaadaa inta lagu jiro maalintii. Waxay qaadaa intaas wax ka badan habeenkii, ka-hor intaadan dareemin baahida inaad kaadiso.
Qaabkaas wuu iska baddeli karaa dadka waaweyn. Dadka waaweyn waxay dhigaan kaadi badan habeenkii. Taas macnaheedu waa inay wax badan kaadshaan habeenkii oo ka badan intay kaadshaan maalintii.
Waa maxay tababarka kaadi-haysta?
Ujeeddada tababarka kaadi-haysta waa in la hagaajiyo astaamaha kaadi-haysta kacsan. Tababarka kaadi-haystu wuxuu ku baraa sida kaadi-haystaada loogu hayo kaadida badan ayadoon la dareemayn wax degdeg ah. Booqo dhaqtarkaaga, la-taliyaha kalkaaliyaha kaadi-ceshan-waaga ama fiisiyo teerabiga kaadi-ceshan-waaga haddii aad ka qabto wax dhibaatooyin ah xagga kontaroolka kaadi-haysta. Waxay kugu bilaabayaan barnaamijka tababarka kaadi-haysta. Haddii aadan waxba qaban oo ku saabsan dhibaatadaada, way ka sii dari kartaa.
Maxaa ku jira barnaamijka tababarka kaadi-haysta?
Waxaa lagu weydiisan karaa inaad samaysato xusuus-qorka kaadi-haysta. Waxaad u baahan tahay inaad haysato xusuus-qorkaas ugu yaraan 3 maalmood. Waxay kuu raad-raacaysaa siday kaadi-haystaadu u shaqayso maalintii.
Xusuus-qorka kaadi-haysta wuxuu raad-raac u yahay:
waqtiga aad musqusha gasho.
Intaad kaadi dhigto mar kasta.
Sidaad dareentay siday u xoogan tahay rabitaanka inaad faaruqiso mar kasta.
Xusuus-qorka kaadi-haysta wuxuu u egyahay wax sidaan oo kale ah:
Waqtiga Xaddiga la‑kaadshey Sidee uxoog badnayd rabitaanka in la kaasho?
Sidee baan u cabiraa xaddiga kaadida la shubay?
Dhig weelka (sida weelka ice-creamka) musqusha. Hadda ku fariiso musqusha oo raaxayso ayadoo cagahaagu saaran yihiin sagxadda musqusha. Ku kaadi weelka. Markaas ku shub kaadida jaagga si aad u cabirto. Ragu way istaagi karaan oo si toos ah ugu kaadshi karaan jaagga cabiraadda.
Sidee baan u cabiraa degdegga?
Shaxdaan waxay muujinaysaa sida loo adeegsado tiro si ay u sifayso degdegga aad dareemayso.
Wax degdeg ah majiro
Ma dareemayo baahi inaan kaadiyo.
Waxaan u faaruqiyey sababo kale dartood.
Degdeg caadi ah.
Waan joojin karaa intii aan doono.
Waxba cabsi kama qabo inaan isku kaadsho.
Degdeg Meel-dhexaad ah.
Waxaan joojin karaa muddo gaaban.
Waxba cabsi kama qabo inaan isku kaasho.
Maba joojin karo.
Waa inaan ku cararo musqusha.
Waxaan ka cabsanayaa inaan isku kaadsho.
Kaadi-ceshan-waa dhaqso ah.
Waan sii daayey ka hor intaanan gaarin musqusha.
Sidee baan u cabiraa sii-daynta anoo adeegsanaya Baarista Miisaanka Baadka?
Baaristan waxay gacan ka gaysataa si loo ogaado intay le’eg tahay kaadida aad sii daysey dhowr maalmood. Si loo sameeyo baaristan waxaad u baahan tahay heerarka miisaanka oo saxda ah. Baaristan waxaad ku samayn kartaa:
adoo ku miisaama baadka oo qalalan Kiishka balaastiga ah ka hor intaadan xiran baadka,
ka dibna ku miisaama baadka qoyan Kiishka balaastiga ah ka dib markaad xirato, iyo
markaana ka jara miisaanka baadka qalalan kan miisaanka baadka qoyan.
Tani waxay muujinaysaa intaad sii daysey sababtoo ah garaamkii kasta wuxuu la mid yahay hal ml.
Sidan oo kale waxyaalaha qaarkood :
Xaddiga la-siidaayey =
Kumaa kugu caawin kara barnaamijka tababarka kaadi-haysta?
Dhaqtarka, la-taliyaha kaalkaaliyaha ah ee kaadi-ceshan-waaga ama fiisiyo-teerabiga kaadi-ceshan-waaga ayaa ku siin kara natiijooyinka ugu fiican. Waxay kaala shaqayn karaan barnaamij adiga kugu habboon.
Qaar ka mid ah xirfad-yaqaanada caafimaadka kaadi-ceshan-waaga waxaa laga heli karaa kilinikada caafimaadka gaarka ah. Qaar kale ayaa ka shaqeeya kilinikada ku yaala adeegga caafimaadka bulshada degaankaaga. Waxay kaloo ka shaqeeyaan kilinikada isbitaalka dadweynaha. Khadka Kaadi-ceshan-waaga Qaran oo ah 1800 33 00 66 ayaa kugu caawin kara inaad hesho kilinikada kaadi-ceshan-waaga degaankaaga.
Intee bay qaadanaysaa?
Badiba barnaanijyada tababarka kaadi-haysta waxay qaataan 3 bilood. Waxaad kulan joogto ah la yeelan kartaa la-taliyahaaga kaalkaaliyaha ee kaadi-ceshan-waaga ama fiisiyo-teerabiga kaadi-ceshan-waaga. Waxay ku bari doonaan siyaabaha laysugu celiyo kaadida muddo dheer. Taas macnaheedu waa inaad ku hayn karto kaadi badan kaadi-haystaada.
Waxyaalaha qaarkood oo aad ka baran karto barnaamijka
Tababarka Muruqyada Miskaha
Fiisiyo-teerabiga kaadi-ceshan-waaga ama la-taliyaha kaalkaaliyaha ee kaadi-ceshan-waaga ayaa ku bari doona sida loo adeegsado muruqyada miskaha. Muruqyadaas waxay hayaan kaadi-haystaada ama kaadi-mareenka. Kaadi-mareenku waa tuubada ka soo-qaada kaadida kaadi-haysta oo dibadda usoo saarta. Muruqyada miskaha oo xooggan waxay gacan ka gaystaan inay celiyaan rabitaanka xooggan oo in la kaadsho ah. Taasi waxay kugu caawinaysaa inaad kaadida isku celiso ilaa intaad ka gaarayso musqusha.
Caadaysiga Kaadi-haysta Fiican
Waa wax caadi ah in la isticmaalo inta u dhaxaysa 1.5-2 litir oo dureero ah maalintiiba in dhaqtarkaagu yiraahdo sidaas Okay maahan mooyee. Sidaasbaa kaadi-haystaadu ayey tartiibtartiib ku baran doontaa inaad hayso kaadi badan. Waxaad u baahan tahay inaad raadraacdo intaad cabto maalin kasta. Si aad sidaas u samayso waxaad u baahan doontaa inaad ogaato inta uu qaado koobkaaga ama qalaxaagu. Koobabku waxay qaadaan laga bilaabo 120 ilaa 180ml halka qalaxu ka qaado 280 ilaa 300ml ama ka badanba.
Iska ilaalinta cabitaanada fisiga ah ama cabitaanada kafeynka leh tan waxay kicin kartaa kaadi-haysta. Waxayna kugu adkaynaysaa inaad isku celiso. Xoogaa kafeyn ah ayaa ku jira jokulaataha, shaaha iyo kafeega. Kaafayn badan ayaa ku jira Koka Koolaha iyo cabitaanada cayaaraha. Waxaa fiican in layska ilaaliyo cabitaanadaas.
Waxaad baran doontaa cabbitaannada la doorto si kaadi‑haystaadu aysan u noqon mid ku xanuunaysa.
Caadaysiga Mindhicirka Fiican
Waxaad kaloo baran doontaa sida calool fadhigu iyo majiiridda in saxarada lays-soodhaafiyo ay u fidin karto muruqyada miskahaaga. Iska ilaali calool fadhiga maaddaama ay keeni karto kontaroolka liita ee kaadi‑haysta. Cun ugu yaraan 2 xabo oo furuud ah iyo 5 adeeg oo qudaar ah maalintii. Waxaad kaloo cuntaa rootiga leh buunshaha.
Ma jiri doonaan wax dhibaatooyin ah?
Waxba ha ka walwalin isbaddellada yaryar oo ka jira kontaroolka kaadi-haystaada. Kuwaasi waa caadi. Qof kasta oo ku jira barnaamijka tababarka kaadi-haysta wuxuu la kulmi karaa dhibaatooyin, markii astaamahaagu ka sii daraan. Taasi waxay dhici kartaa markii:
aad qabto cudur kaadi-haysta (u-tag si toos ah dhaqtarkaaga).
aad daalan tahay ama caajisan tahay.
aad walwalsan tahay oo walaacsan tahay.
cimiladu ay qoyan tahay, oo dabayl ama qabow jiro.
aad xanuunsan tahay (sida dureyga ama fuluuga).
aad tahay haween xaydka qabta.
Haddii wax dhibaato ah ay dhacaan, waxba ha qalbi jabin. Caadi iska-dhig siina wad isku dayga.
Keli kuma tihid arintan. Kaadi-haysta iyo mindhicirka liita waxaa si fiican loogu daaweyn karaa ama si fiican loogu maamuli karaa daaweynta saxdaa. Haddii aadan waxba qaban, way ka sii dari karaan.
Ka wac la-taliyeyaasha khibradda leh Khadka Kaadiceshin-waaga Qaran (National Continence Helpline) oo lacag la’aan ah:
macluumaadka ku saabsan adeegyada degaanka
(8am - 8pm Isniinta ilaa Jumcaha AEST)
Si loo diyaariyo turjumaan ayadoo la marayo Adeegga Turjumaanka Taleefanka (TIS), ka wac 13 14 50 Isniinta ilaa Jumcaha Waxaad weydiisataa Khadka Kaadiceshin‑waaga Qaran (National Continence Helpline). Macluumaadka luqadaha kale waxaa kaloo laga heli karaa continence.org.au/other-languages
* Wicitaannada ka socda moobaylada waxaa laga qaadaa qarashka qiyaasaha ku habboon.